Armenia : Tian’ny Blaogera Ny Haino Aman-jery – Tian’ny Haino Aman-jery Ny Blaogy , Fa Iza no Tena Tia Kokoa ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2018 16:22 GMT
Efa nibanjina hatrany ny haino aman-jery ho an'ny daholobe ireo bilaogera Armeniana hatramin’izay na dia tsy azontsika antsoina loatra hoe fitiavana aza izy io, satria, etsy ankilany, tsy dia misy zavatra hotiavina loatra amin'ny filazam-baovao Armeniana tato ho ato. Raha ny dokadoka ho an'ireo bilaogera navoakan’ny fampahalalam-baovao vao tsy ela akory, nanamarika mazava i Ahousekeeper [AM] fa :
Nahafantatra ny tontolon’ny blaogy Armeniana ny gazety mpivoaka isanandro “Aravot”. Tamin’ny alalan’ny resaka nifanaovana tamin’I Uzogh [RU], ary avy eo tamin’ny fitetezana ireo gazetinay, tonga taminà famintsinana ry zareo hoe tsy tia lalao politika ary mankahala ny fiarahan’ny samy lahy sy ny samy vavy ireo blaogera Armeniana”. Ka dia fantatrao izany izao hoe inona no tena ironan’ny mpanao gazety, sa tsy izany?
Raha toa ka misy ireo blaogera mankasitraka ny fahitàna ny filazambaovao Armeniana miditra anatin’ny taonjato faha 21 nony farany, misy koa ireo manontany tena [RU] hoe , tanatin’ireo resaka marobe tao amin’ny tontolon’ny blaogy, maninona ilay mpanao gazety Aravot no liana tamin'ny resaky ny blaogera mikasika ny fiarahan’ny lahy samy lahy na vavy samy vavy ? Na izany aza anefa, na teo aza ny famintinana hafahafa nataon’ilay mpanao gazety sy ny lohateny hita mazava fa “mihantsy”, dia nahaliana tsara ihany ilay lahatsoratra, hoy ny Armenian News Blog [AM] ] namintina. Tsara ihany koa ny manamarika fa tsy hoe tena tia ny blaogera fotsiny ihany ireo haino aman-jery roa , A1 + sy ny Radio Hay, fa tena mankasitraka azy ireo mihitsy koa ka nanangana ny blaoginy manokana koa.
Hita tao amin’ny http://a1plus.blogsome.com [AM]] ny blaogin'ny A1+,ary ny blaogin’ny Radio Hay kosa ao amin'ny http://www.radiohay.am [AM].
Mikasika ilay fitiavana “mifamaly” eo amin’ny blaogera sy ny fampahalalam-baovao Armeniana , jereo ato ny taterin’ny gazety Ogostos [RU] mikasika ny ALM, Televiziona sokajian’ireo tanora nahita fianarana ao Armenia ho toy ny fahitalavitra mahamenatra izay toy ny misangisangy ny ijerena azy.
Ao amin’ny maridrefy FM ny “ALM”, izany no midika fa afaka nahazo azy i Armenia iray manontolo.
Voaforona hatreto ny fahitalavitra isan’ny mahagaga indrindra manerana izao tontolo izao. Tsy mitovy amin'ny hafa rehetra. Afaka manao izay tiany ny tompon’ilay televiziona. Afaka mandefa fety karakaraina ao amin’ny“ALM” mandritry ny 24 ora noho ny taombaovao izy raha tiany. Na koa, mampiseho zazalahy iray mihira ny hira nentim-paharazana Yezidi mandritra ny 24 ora. Afaka miresaka momba ny politika mandritra ny 24 ora isanandro izy amin'ny fomba hafahafa indrindra … raha tiany. Ary raha tiany, afaka milaza amin’izao tontolo izao hoe” Yezdis voaozona, nanasa azy ireo hihira eto aho, ary setrin'izany, tsy mifidy ahy izy ireo! midika izany fa tsy hihira ato amin’ny televizionako intsony izy ireo!
Tao amin’ny blaogin’I Uzogh [RU] koa no nahitàna fanombohana adihevitra iray hafa mahaliana momba ny fampahalalam-baovao ao Armenia. Nandefa lahatsarim-baovao avy amin’ny fandaharana fampitana vaovao, Haylur, avy amin’ny fahitalavi-panjakana ao Armenia, namoaka vao tsy ela akory ilay fivoriana niarahana tamin’i Levon Ter-Petrossian sy ireo mpifidy tao an-tanànan'i Talin mialoha ny fifidianana, ka nandritra izany no nahitàna olona iray nidarohan'ireo mpanohana ilay kandidà ho filoham-pirenena noho ny fitabatabany, hoe “tsy manohana anao ny mponina eto Talin!”.
Nangataka ireo blaogera Armeniana hafa izay miasa ao amin’io tontolo io ilay blaogera momba ny fahitan-dr zareo ilay vaovao sy ny hoe ara-dalàna na tsia. Ho valin’izay, nitondra fanazavana amin’ny antsipirihany i Mark Grigoryan [RU] ] tamin’ny fanipihina fa :
Amin’ny ankapobeny, afaka natao ho tsaratsara kokoa noho ireny ny fitaovana nampiasaina. Mihevitra aho fa tokony hamoaka vaovao manana kalitao avo lavitra noho ireny ny Televizionam-panjakana ao Armenia.
Nisy olona hafa koa natao fanadihadiana namaly ny filazan’i Uzogh[RU] hoe tsy mifandanja tsara ilay lohahevitra navoaka..
Ho famintinana, azontsika atao ny milaza fa mandritry ny fotoana nanaovan’ireo filazambaovao ny dingana voalohany ho fitiavana ny tontolon’ny blaogy, efa nandinika, nampitaha sy nanakiana ny haino aman-jery sahady ireo blaogera. Eo ampijerena ny fironana vao haingana eny anaty filazambaovao anatin’ny fotoana mialoha ny fifidianana, hita fa ho taraiky eo amin'io ry zareo ato anatin'ny herinandro na roa herinandro ho avy.
Ny fakàna am-peo an’ity lahatsoratra [AM] ity dia ho henonao ao amin’ny Radio Hay FM 104.1 ny Sabotsy 9/02/08 amin’ny 11:00.